Waa Tan Sababta Cuntooyinka Kulal Cimriga Ay U Dheeraayaan | Xaqiiqonews
Waa Tan Sababta Cuntooyinka Kulal Cimriga Ay U Dheeraayaan
Hadii aad ka mid tahay dadka ku waalan cuntooyinka kulul, khubarada caafimaadka waxa ay kugu waaninayaan in aad caadadan sii waddo.
Cilmi-baaris Taliyaaniga laga sameeeyey dhawaan ayaa lagu sheegay in cuntooyinka kulal ay ka qeyb dqaataan cimri dheeriga qofka qiyaas dhan 25%.
Daraasaddan oo uu fuliyey machad lagu magacaabo Normide, oo ku yaalla magaalada paisley ee dalka Taliyaaniga, ayaa lagu qoray in dadka afar mar ka badan cuna todabaadkii filfisha kulul ama basbaaska ay kaga halis yaryihiin dhimashada dad daga ah, marka loo barbardhigo kuwa kale ee iyaga aan cunin cuntadan kulal.
Daraasadda oo ay ka qeyb galeen 22 kun qof,ayaa waxa si dhaw loola socday oo indhaha lagu haayey cuntooyinka ay cunayeen dadkan, muddo 8 sano ah.
Dhowr daraasado caafimaad oo horay loo shaaciyey ayaa daboolka ka qaaday in maadada “Capsaicin” ee mas’uulka ka ah dhadhanka kulul ee cuntooyinka sida filfisha iyo basbaaska ay tahay maado door weyn ka qaadato caafimaadka jirka, waxa ayna si weyn ula dagaalantaa unugyada kansarka.